Ukuphupha ngeJet Ski ▷ ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-jet ski ikwabizwa ngokuba yi-motorboat okanye, ngokuchanekileyo, i-jet ski. Igama elithi "jet ski" ngokwalo lixesha elikhuselweyo elivela kwinkampani yaseKawasaki, kodwa liqhelekile kwintetho yemihla ngemihla.
I-jet ski sisikhephe esithandwa kakhulu, ngakumbi kumazwe akumazantsi nakwimimandla yeholide. Kuba unokufikelela ngokukhawuleza kwisantya esingaphezulu kwe-100 km / h ngesikhephe sejet okanye ngesikhephe esihamba ngemoto, ukusetyenziswa kubotshelelwe kwimeko ezithile. EJamani kufuneka ube nelayisensi yesikhephe semidlalo kwaye ubekwimo yomzimba elungileyo. Kumazwe aphesheya eeholide, nangona kunjalo, iimeko zihlala zingangqingqwa kangako, zivumela abantu abancinci ukuba basebenzise i-jet ski ngokunjalo.
Inqaku elilandelayo licacisa ukuba umfanekiso wephupha "wejet ski" ungathetha ntoni kuwe kunye nendlela onokuyitolika ngcono ngayo.
1 Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba wenze i-jet ski emanzini ephupheni, emva koko uya kuyithanda nayo loo nto el mundo ngokwenene. Iihambo Kwaye musa ukubaleka kwimingcipheko emininzi. Nangona kunjalo, uya kuhlala uthe qwa kwaye uya kuba nakho ukuvavanya ukuba iphi na imida yakho kwaye kufuneka ume nini.
Umbono we "jet ski" ukwabonisa, ngokubonakalayo, ukuba ungahamba ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ufike kwindawo oya kuyo ngaphandle komzamo. Nangona kunjalo, uhlala uhlala unikele ingqalelo kuyo, nkqu ulawulo thatha ingqalelo kwaye ke ngoko uthathe isigqibo ngokwakho ukuba loluphi ulwalathiso oza kuluthatha.
Zithembe izivamvo zakho kwaye uya kukhuseleka. Nangona kunjalo, ukuba ufumene ingozi ye-jet ski, la mava ephupha alumkisa wena Ukungaphumeleli kwaye ikwacebisa ngamandla ukuba ungazicacisi.
Ukubaleka i-jet ski, oko kukuthi, ukukhuphisana nabanye abaqhubi bephenyane, kubonisa ukuba umntu uyathandabuza ukuthatha isikhundla esisezantsi. Uziva njalo iinkokeli ezelweobonisa wonke umntu ukuba enze ntoni kwaye kunzima kakhulu ukuthoba omnye umntu onegunya.
Kodwa khumbula ukuba uhlala uguqula impixano ibe ngumanyano. Akukho mntu kufuneka abe ngaphezulu okanye athobeke; onke amaqela anokuzuza kulwazi nakumava omnye nomnye.
Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba "ipipi" umfanekiso wephupha uyinxalenye yebali lamaphupha akho, kunokwenzeka ukuba ulangazelela okungakumbi ukwenza lula y Ukukhathazeka ebomini. Zive ukhululekile kwaye ulula ngendlela obuya kuziva ngayo kwiholide yesikhephe elwandle. Nandipha ubuhle bomzuzwana, vumela umoya ujikeleze impumlo yakho kwaye uvuthele intloko.
Isimboli yephupha ifuna ukukuxelela: Fumana ezi zikhefu zincinci kubomi bemihla ngemihla. Akusoloko kufuneka ukuba luhambo olukhulu olwandle okanye kwiindawo ezikude. Kwakhona ekhaya, vumela ukuba ubekho ixesha elininzi kwaye uzenzele wena kuphela.
Uphawu lwephupha «iJetski» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha «jet ski» ibonisa iphupha ngokwembono yokomoya efumaneka kwi impilo Inokuba lula kwaye kuya kufuneka uthethe kakuhle kwinkolelo yokuba uhlala usilwa nzima kuyo yonke into.